ग्रीष्मकालीन सुसमाचार, तपाइँ जाडो बिन्दु कपाल हटाउने यन्त्र जान्न आवश्यक छ-उद्योग समाचार-शेन्जेन नोबल स्मार्ट विनिर्माण टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड
ग्रीष्मकालीन सुसमाचार, तपाइँ फ्रिजिंग पोइन्ट कपाल हटाउने उपकरण थाहा पाउनु पर्छ
समय: 2021-06-29 हिट्स: 6
ग्रीष्म hereतु यहाँ छ, त्यहाँ कुनै केटीहरु जो "kiwifruit" जस्तै होईन, हैन? क्रम मा तपाइँको मनपर्ने लुगा लगाउन र तपाइँको लामो खुट्टा र हतियार आत्मविश्वास देखाउन को लागी, तपाइँ पहिले तपाइँको शरीर कपाल हटाउनु पर्छ आफैंलाई अझ सुन्दर बनाउन को लागी! त्यसोभए कपाल हटाउने तरिका के हो? वास्तव मा, त्यहाँ कपाल हटाउने को धेरै विधिहरु छन्, जो अस्थायी कपाल हटाउने र स्थायी कपाल हटाउने को प्रभाव अनुसार विभाजित गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी: शेविंग, plucking, फोटोन कपाल हटाउने, आदि जब यो प्रयोग गरीरहेको छ, तपाइँ तपाइँको आफ्नै स्थिति र विशिष्ट भागहरु को अनुसार सबै भन्दा राम्रो कपाल हटाउने विधि छनौट गर्न को लागी आवश्यक छ। हामीलाई आज बिभिन्न कपाल हटाउने विधिहरु को बारे मा जानौं!
शेवि la आलसी मानिसहरु को लागी सबैभन्दा उपयुक्त तरीका हो, किनकि यो कपाल हटाउने सबैभन्दा सजिलो र सरल तरीका हो, तर यो छोटो समय को लागी रहन्छ। न केवल यो कपाल को विकास को दायरा र बृद्धि दर लाई ढिलो गर्न सक्दैन, तर पुनर्जीवित कपाल बाक्लो र मूल कपाल भन्दा अग्लो देखिनेछ किनकि यो भर्खरै बढेको छ। तेसैले, बारम्बार दाढी पक्कै धेरै विश्वसनीय छैन।
कपाल काट्नु पनि हाम्रो जीवन मा एक सामान्य तरीका हो। यो एक अधिक प्रभावी अस्थायी विधि हो, र यो लगभग १० दिन सम्म, शेविंग भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ। काट्ने पीडा स्पष्ट छ। सरौता संग plucking विधि कपाल को एक सानो मात्रा plucking को लागी उपयुक्त छ, र मोम बिकिनी बाहेक अन्य भागहरु हटाउन को लागी उपयुक्त छ, र ज्यादातर अंगहरुमा प्रयोग गरीन्छ। यो ध्यान दिनुपर्छ कि कपाल plucking विधि जलन वा कपाल follicles को यांत्रिक क्षति को कारण सजीलो छ, र प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरु पनि सामान्य छन्, जस्तै कपाल कैद, कपाल follicle विरूपण, विकृति, र कहिले काहिँ छाला pigmentation, folliculitis र अन्य छाला संक्रमण।
घर चिसो बिन्दु कपाल हटाउने उपकरण-सबैभन्दा प्रभावकारी लामो-स्थायी कपाल हटाउने विधि
यो हाल एक धेरै उन्नत र लामो समय सम्म चल्ने विधि हो। चिसो बिन्दु कपाल हटाउने उपकरण चुनिंदा photothermal कार्य को सिद्धान्त मा आधारित छ। प्रकाश एक निश्चित तापमान मा कपाल follicles राख्न छाला सतह मा प्रवेश, र बिस्तारै कपाल follicles र वरपरका स्टेम सेलहरु लाई लामो समय सम्म कपाल हटाउन को लागी निष्क्रिय गर्दछ। साधारण फोटोन कपाल हटाउने अनुभव को बखत, त्यहाँ यस्तो छाला तताउने को रूप मा असहज अनुभवहरु हुनेछ, र चिसो बिन्दु कपाल हटाउने उपकरण पुरा तरिकाले यी समस्याहरु बाट बच्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कपाल हटाउन को लागी आइस कूलिंग प्रकार्य को लागी आवेदन गर्न अनुमति दिन्छ। यो संवेदनशील छाला मान्छे को लागी सुसमाचार हो।
अघिल्लो: त्यहाँ एउटा कारण यो छ कि लेजर कपाल हटाउने उपकरण बाहिर खडा हुन सक्छ
अर्को: कपाल हटाउने उपकरण सुरक्षित रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने